नेपाल आज | ज्ञानेन्द्रलाई ठेगान लगाई छोडेका माधवले ओलीलाई पनि ठेगान लगाउदै !
ज्ञानेन्द्रलाई ठेगान लगाई छोडेका माधवले ओलीलाई पनि ठेगान लगाउदै !
प्रधानमन्त्री एवम पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरुको आन्तरिक विवादका कारण नेकपा एमालेमामा चरम गुटवन्दी छ। नेताहरु विच एक अर्कोलाई दोसारोपण गर्ने र भनाभन गर्ने क्रम निरन्तर जारी छ।
तर, उनको स्वभाव, काम गर्ने शैली र अहिलेसम्म देखिएको अडानलाई हेर्ने हो भने नेता नेपाल ओलीले वुझाए जस्ता भने पक्कै पनि होईनन् ।
उनको चट्टानी अडानका कारण नेपाललाई पटमुर्ख जस्तो देखिन सक्छ। तर, त्यहि अडान र धैर्यता उनको हतियार हो। यहि हतियार प्रयोग गरेर उनले पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन पुर्याए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का उपाध्यक्ष भरतविमल यादव, संयुक्त वाममोर्चाका अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यो सम्झौता गर्नमा नेता नेपालको भुमिका महत्वपुर्ण थियो ।
०६४ पुस १३ मा दलहरुले अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी नेपाललाई ’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ बनाए।
संविधानसभाको निर्देशनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै प्रतिवाद गरेनन्। बरु सहज बहिर्गनको बाटो लिए। उनी करिब ७ वर्ष राजाको हैसियतमा रहे। उनी ०५८ जेठमा तत्कालीन राजा तथा उनका दाजु वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि राजा बन्न पुगेका थिए।
अहिले आएर प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओली चाहिँ पट्मुर्ख जस्तो देखिन थालेका छन्। उनले नत नेकपाको एकता कायम राख्न सके नत अदालतले ब्युँताएको एमालेलाई नै एक ढिक्का वनाएर अघि वढ्न सके । उनका रास्ट्रवादी छवी पनि नाङ्गेझार भएको छ। ओली यतिवेला नेता÷कार्यकर्ताको अगाडि पटमुर्ख जस्तो देखिएका छन्।
यता, माधव नेपाल आफनो सान्त, भद्र र सन्तुलित ब्याक्तित्वले ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाउन सफल भए भने अहिले ओलीलाई हरेक कृयाकलापमा घुँडा टेकाउँदैछन् । ओलीले चालेका हरेक कदम असफल हुदै जानुलाई नेपालको सफलताका रुपमा वुझ्न थालिएको छ।
केपी शर्मा ओली माधवकुमार नेपाल शेरबहादुर देउवा ज्ञानेन्द्र शाह